Atule gị na saịtị si n'usoro na ahaziri Search | Martech Zone
Otu n'ime ndị ahịa m kpọrọ n'izu gara aga wee jụọ ihe kpatara ya, mgbe ọ na-achọ, saịtị ya bụ nke mbụ na nhazi mana onye ọzọ mere ka ọ gbadata peeji ahụ ntakịrị. Ọ bụrụ na ị nụbeghị ruckus, Gugul agbanyela nchọta ahaziri iche arụpụta na-adịgide adịgide.
Nke ahụ pụtara na dabere na akụkọ ọchụchọ gị, nsonaazụ gị ga-adị iche. Ọ bụrụ n’ị na-enyocha ogo saịtị gị, ị ga-ahụ na ha niile agamago. Agbanyeghị, ọ ga - abụrịrị na ọ kaara gị mma ma ọ nweghị onye ọ bụla. Iji nyochaa ogo gị n'ezie, ị ga-agbanyụ nsonaazụ ọchụchọ ahaziri iche.
Enwere ụzọ atọ iji gbanyụọ ọchụchọ ahaziri iche:
Iji nwa oge hụ na ọ pụọ, pụọ na ngwa Google ọ bụla ị banyere. Dị ka ihe atụ ọzọ, gbanye Nchọgharị Onwe gị na ihe nchọgharị gị (Ntọala ihe nchọgharị niile nwere ya .. maka ntụgharị, ị ga-anọrịrị na IE8).
Wepu kuki ọ bụla na Google. Nke a ga - apụ gị apụ ebe nchọzighi ahaziri. Ọzọ, Nchọgharị nkeonwe na Safari, Firefox ma ọ bụ IE8 kwesịrị inwe otu mmetụta ahụ. Na Google Chrome, a na-akpọ atụmatụ ahụ Incognito na-eme nchọgharị.
Na-adịgide adịgide wepu gị akụkọ ihe mere eme, nbanye gị Akụkọ Ọwa Ozi Gugul ma gbanyụọ ya. Gaa Akaụntụ M na pịa Dezie ọzọ ka My Ngwaahịa na pịa Hichapụ Akụkọ Weebụ na-adịgide adịgide. Mgbe ehichapụ akụkọ ihe mere eme gị, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi mepụta nsonaazụ ọchụchọ gị. Ikwesiri ime nke a mgbe mgbe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ka ọ dị mfe na onwe gị, m ga-akwado igbanwe ya (n'ụzọ dị ịtụnanya) Google Chrome. Nwere ike imeghe windo Incognito (ctrl-shift-N) ọ gaghị enweta akụkọ ọchụchọ gị ma ọ bụ tọọ kuki… ị ga-enwe ike ịnọ na-abanye na Google na otu windo yana incognito na windo ọhụrụ. Nke ahụ bụ otú m si nweta nseta ihuenyo dị n'elu… ahaziri n'aka ekpe ma ghara ahaziri ya n'aka nri na windo incognito.
Ihe nke Google Chrome bu na Nchọgharị nkeonwe atụmatụ nke ihe nchọgharị ndị ọzọ na-eme windo niile na nzuzo. I nweghi ike inwe ufodu ndi di na ufodu ndi na adighi. Chrome emeela ezigbo ọrụ n'ime nke a.
Buru n’uche na nke a enyebeghi izi ezi. Ngwaọrụ gị na ọnọdụ gị ka ga-emetụta nsonaazụ ya. Maka ezi ile anya na ogo gị, ị nwere ike ịlele Njikwa Nchọta Google m ga-akwado gị ka ị denye aha na ya Semrush.
Tags: ịlele ogoincognitoisiokwu ogoisiokwu rankingsahaziri onwe yaogonsonaazụ nsonaazụ ọchụchọNsonaazụ ọchụchọ njin peeji nkeagwoogo
Dee 17, 2009 na 8: 48 AM
Doug, ekele! Are bụ onye izizi iji kwado ojiji maka nchọgharị icognito na-abụghị nke doro anya 🙂
Dec 17, 2009 na 6:36 PM
Ndi incognito a na aru oru dika odi nma?
(Gini mere na apughi m iji ID WordPress iji kwuo okwu?)
Jenụwarị 7, 2010 na 12:27 PM
Nke a bụ otu n'ime ụzọ dị mfe esi etinye aka na isi m. Yabụ, taa mgbe achọrọ m ozi a, ọ dịịrị mfe ịchụ nta ya ma tinye mmụta ahụ. Ekele dịrị gị, ebudatara m Chrome ma jiri ibe Incognito nwalee ụfọdụ ọchụchọ. Daalụ!